कसरी नम्बर फेक गर्ने: ट्विटर र फेसबुकबाट पाठ | Martech Zone
नम्बर कसरी बनाउने: ट्विटर र फेसबुकबाट पाठ
सोमबार, जनवरी 18, 2010 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
मैले एक पटक एक व्यंग्य पोस्ट लेखेको थिएँ Users.२3.24% फेसबुक प्रयोगकर्ताहरू मरेका छन्। मेरो पोइन्ट एकदम सरल थियो, फेसबुकले भर्खरको प्रयोगको साथ खाताहरूको सट्टा कुल खाताहरूको स counting्ख्या गणना गरेर उनीहरूको संख्या फुलाउन जारी राख्यो।
फेसबुक विज्ञापन पृष्ठमा, यसले भन्छ, "Facebook 350,000,000०,००,००० सक्रिय फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूमा पुग्नुहोस्।" साँच्चै? यदि म विज्ञापन को लागी साइन अप गर्छु, त्यो विज्ञापन 350 XNUMX करोड प्रयोगकर्ताहरुमा पुग्छन्? मलाई लाग्छ फेसबुक अझ राम्रो हुनुपर्छ के परिभाषित एक सक्रिय प्रयोगकर्ता छ.
फेसबुक तथ्या page्क पृष्ठ भन्छ:
Million 350० मिलियन भन्दा बढी सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू
हाम्रो सक्रिय प्रयोगकर्ताहरूको %०% कुनै पनि दिनमा फेसबुकमा लग इन गर्दछ
Million 35 लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू प्रत्येक दिन तिनीहरूको स्थिति अपडेट गर्छन्
55 XNUMX लाख भन्दा बढी स्थिति अपडेटहरू प्रत्येक दिन पोष्ट गरियो
मलाई लाग्छ फेसबुकको जस्तै १175 करोड .० लाख छ सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू। केवल फेसबुक यसको संख्याको साथ रचनात्मक भइरहेको छैन, उनीहरूले वकिलहरूलाई पनि बाहिर निकालेका छन् अनुप्रयोगहरूको पछि गएर तपाईंको खाता हटाउने छ। को वेब २.० सुसाइड मेशिन पोस्ट गरेको छ बन्द गर्नुहोस् र पत्र छोड्नुहोस् फेसबुकबाट। यस प्रकारको बदमाशी रोक्नु पर्छ! तिनीहरू पनि अवरुद्ध र एक C&D पठाइयो सेप्पुकु। एकै साथ उनीहरूले प्रयास गरिरहेका छन् उनीहरूको स्वचालित मित्र खोजकर्ता मार्फत थप धर्मपुत्रकलाई धक्का दिनुहोस्.
ट्विटरले समान मूल्या valu्कन अधिवक्ताहरूबाट पाठ लिएको देखिन्छ। ट्विटरले अटोफोलो मेकानिजमेन्टहरू मनपर्दछ, तर तिनीहरूका कुकुरहरूलाई स्वत: अनपढसँग अनुप्रयोगहरूमा पठाइएको छ।
मलाई कुनै शंका छैन twitter र फेसबुक बढ्न जारी। त्यसोभए किन तिनीहरू यी सेवाहरू यत्तिकै बढ्दो गरी भए पनि यी सेवाहरूलाई हानी गर्न कोशिस गरिरहेका छन्?
तीन कारणहरू: मूल्यांकन, विज्ञापन, र लगानीकर्ता
तथ्य यो छ कि त्यहाँ करोडौं परित्याग गरिएका खाताहरू छन् र ट्विटर र फेसबुकले यो कुरूप खेल खेल्दै लाजमर्दो छ। यो सामाजिक मिडियामा खुलापन र ईमानदारीको भावना को प्रतिरोध हो। तिनीहरू लज्जित हुनुपर्दछ र ब्लग गर्ने शक्तिहरू जुन उनीहरूको सट्टा जवाफदेही हुनुपर्दछ मुर्खता र नानी ती सबैमा।
यदि हामी यहाँ समाचार पत्र उद्योगको बारेमा कुरा गरिरहेका थियौं, र तिनीहरूले स्थापना गरेको दिनदेखि आज सम्म अखबार पढ्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई गन्ती गरे, हामी रक्तपातपूर्ण हत्याको चिच्याउनेछौं र झूटो विज्ञापनको लागि उनीहरूबाट क्र्यापलाई मुद्दा हाल्ने सम्भावना छ। तर यी टेकका सुनौलो केटाहरू हुन्… हामी ट्विटरमा त्यसो गर्दैनौं।
बजार सावधान केवल एक व्यक्तिले मलाई भनेको छ कि तिनीहरू फेसबुक विज्ञापनसँग खुशी छन् - र यो कम्पनीले एक ब्रान्डि strategy रणनीति पोष्ट गरिरहेको थियो जहाँ उनीहरू वास्तवमै फेसबुक प्रयोगकर्ताहरू विज्ञापन क्लिक गर्न चाहँदैनथे। यो राम्रोसँग काम गरिरहेको छ, कोहीले क्लिक गरिरहेको छैन।
यदि तपाईं आफ्नो फेसबुक खाता मेटाउन चाहानुहुन्छ भने जानुहोस् सेप्पुकु गृह पृष्ठ जहाँ उनीहरूले यो-आफैले गर्ने निर्देशनहरू प्रदान गर्दछ। त्यो पनि जहाँ सुन्दर छवि आयो।
मार्केटिंग ब्लग लाइक र मननपर्ने
VideoHere: कुनै पनि अनुप्रयोगमा भिडियो एकीकृत गर्नुहोस्
जनवरी 18, 2010 1:16 बजे
आमेन। यो ठूला नाम मात्र होइन। साना पसलहरूले पनि एउटै चाल प्रयोग गर्छन्। केवल अनलाइन गेमहरू खोज्नुहोस् र तपाईंले भेट्नुहुने प्रत्येक साइटले लाखौं प्रयोगकर्ताहरूलाई गेम खेल्ने दाबी गर्नेछ। पक्कै पनि, लाखौंले एउटा खाता खोलेका हुन सक्छन् तर सबैभन्दा सरल प्रयास गर्न र खेल त्याग्न।
BTW, यहाँ विचारको लागि अर्को खाना छ। मसँग फेसबुक खाता छ तर यसलाई ट्रिलियन मार्फत मानिसहरूबाट अद्यावधिकहरू प्राप्त गर्न मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। साँच्चै आफैंलाई अद्यावधिक पोस्ट नगर्नुहोस्। म लगभग हरेक दिन Trillian मार्फत लगइन गर्छु तर के मलाई एक सक्रिय प्रयोगकर्ता मान्नुपर्छ? म विरलै लगइन गर्छु र विज्ञापन उद्देश्यका लागि पृष्ठदृश्यहरू प्रदान गर्छु। पक्का, म एक मिनेट वृद्धिशील उपयोग उत्पन्न गर्दैछु तर समग्रमा, मेरो गतिविधि स्तर ब्रह्माण्डमा एक औसत किशोरकिशोरी वा तपाइँको गतिविधि स्तरको तुलनामा स्पेक जस्तै छ। 😛
जनवरी 19, 2010 7:31 बजे
"मलाई लाग्छ कि फेसबुकका 175 मिलियन सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू जस्तै छन्।"
माफ गर्नुहोस्, तर मलाई लाग्छ "सक्रिय" प्रयोगकर्ताको तपाईंको परिभाषा अलि हास्यास्पद छ। सक्रिय प्रयोगकर्ता मान्नको लागि मैले फेसबुक *हरेक दिन* लगइन गर्नुपर्छ?
साथै, ट्विटरले स्वत: फलो गर्ने उपकरणहरूलाई अनुमति दिँदैन: http://help.twitter.com/forums/10711/entries/68916
जनवरी 20, 2010 मा 12: 41 एएम
एक सक्रिय प्रयोगकर्ता के हो मलाई परिभाषित गर्नुहोस्, रायन? यदि एक सक्रिय प्रयोगकर्ता एक व्यक्ति हो जसले हप्तामा एक पटक मात्र लग इन गर्दछ - म विश्वस्त छु कि तिनीहरूको 350 मिलियन गणनामा थपिने छैन। मेरो पोष्टको कुरो यही हो ।
Twitter ले पूर्ण रूपमा तेस्रो पक्षीय अनुप्रयोगहरू मार्फत स्वत: फलो गर्ने अनुमति दिन्छ र प्रवर्द्धन गर्दछ। तपाईंले पठाउनुभएको लिङ्कले 'आक्रामक' स्वत: फलो गर्नेलाई मात्र जनाउँछ।
Social-Too ले आक्रामक रूपमा स्वत: अनफलो गर्दैन, यसले तपाईंलाई फलो गर्ने मानिसहरूलाई मात्र अनफलो गर्छ। किन यो अनुमति छैन?